We.com.mm - မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံး Rose Quartz အဖွဲ့ ပျက်သွားပြီဟု တရားဝင်ကြေငြာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံး Rose Quartz အဖွဲ့ ပျက်သွားပြီဟု တရားဝင်ကြေငြာ
တောင်ကိုရီးယား မြန်မာ နှင့် ထိုင်း နိုင်ငံ သုံးနိုင်ငံ ပေါင်းစည်းပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများစွာ လုပ်ခဲ့တဲ့ Rose Quartz အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်အားပေးဝန်းရံမှုအများဆုံး ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
KPop ကို နှစ်သက်ကြတဲ့ Kpoper တွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပြီး Rose Quartz အဖွဲ့ဟာ စာချုပ်သက်တမ်း မပြည့်ခင်အထိ အယ်လ်ဘမ် ၃ ခု ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့လည်း ဒီနေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်း လေးရက်နေ့မှာတော့ JBJ Ent ကနေမှ အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
JBJ Entertainment ဖြစ်ပါတယ်။ Rose Quartz အပေါ် အမြဲတမ်း ချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်များအားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ်။
2018 ခုနှစ်မှာ JBJ ကနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် 0316 Entertainment နဲ့အတူ Single Album3ပုဒ် project ထုတ်လုပ်ရန် သဘောတူညီချက်ဖြင့် JBJ artist တွေဖြစ်ကြတဲ့ Cindy, Naychi နဲ့ 0316 Entertainment artist တွေဖြစ်ကြတဲ့ Sungshin, Earn, Eing တို့အတူ Girl Group Rose Quartz ရဲ့ Realize, Ra Pa Pam Pam, 3, 2, 1! အစရှိတဲ့ Single Album စုစုပေါင်း3ပုဒ်ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိပြီး မြန်မာ, ထိုင်း နဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကို အသွားအလာလုပ်ရင်း activity တွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
2019 ခုနှစ် ဇွန်လအထိမှာတော့ JBJ Entertainment နဲ့ 0316 Entertainemnt ကြား သဘောတူညီထားခဲ့သော Project က အားလုံး ပြီးစီးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
JBJ Entertainment ကတော့ Rose Quartz member တွေဖြစ်ကြတဲ့ Cindy၊ Naychi တို့နဲ့ အချိန်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်မှာ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ Rose Quartz မှာ ထွက်ခွာပြီး လမ်းအသစ်ကို စတင်ဖို့ရာကို အားပေးပံ့ပိုးပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်အထိ အတူတူရှိခဲ့ကြတဲ့ Naychi နဲ့ Cindy ရဲ့ ရှေ့လျှောက် လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ချစ်ခင်အားပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Sungshin ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း အတွက်လည်း တရားဝင် ရှင်းလင်းပေးချင်ပါတယ်။
Sungshin ကတော့ "3, 2, 1!" Album activity ပြုလုပ်စဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိခဲ့တဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံကို သွားလာရင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆက်မပြတ် ကုသမှုခံယူပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေက များစွာတိုးတက်လာခဲ့သော်လည်း Rose Quartzရဲ့ activity ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာမှာ အခက်အခဲရှိနိုင်သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူ အကြံပြုချက်အရ Sungshin ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် Rose Quartz တွင် အနုပညာလှုပ်ရှားဖို့ကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ရပ်နားလိုက်ရပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Sungshin ဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် မိဘများနဲ့အတူ အနားယူရင်း ကျန်းမာရေး ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာဖို့ကို အားစိုက်လျက်ရှိပါတယ်။
ကျန်းကျန်းမာမာရှိလာမယ့် Sungshin ကို စောင့်မျှော်ပေးခဲ့ကြတဲ့ Venus များ အားလုံးထံ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ရင်းနဲ့ အခုအချိန်အထိ Sungshin ကို ချစ်မြတ်နိုးပေးကြတဲ့ ပရိသတ်များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပန်ကြားလိုပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကို အသိပေးဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်များအားလုံး Venus များ အားလုံးကို တစ်ခါ ထပ်မံ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ Rose Quartz member အားလုံးကတော့ ပရိသတ်များရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ယုံကြည်ပေးမှုများကို ရင်ထဲထည့်ပြီး ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးမှာ တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားရင်း အားလုံးရဲ့ မေတ္တာကို တုန့်ပြန်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့လျှောက်ကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဆက်လက် အားပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိလျက်။
ဒီထက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ လို့ အားပေးလိုက်ပါတယ်
sources - JBJ Entertainment
ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှု မလုပ်ထားတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး (၆) ဦး
လူငယ်တွေစံထား အားကျရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက Idol Couple
လန်းမြဲလန်းဆဲဖြစ်တဲ့ အပျိုကြီးမမ (5) ယောက်
တောင်ကိုရီးယားမှ နာမည်ကြီးအမျိုသား (၇) ဦးရဲ့ မြေအောက်ရထားစီးနေကြတဲ့ပုံများ
90's Kid တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့ First Love အတွက်သီချင်းကောင်းလေး ( ၆ ) ပုဒ်
ခြေထောက်နာတာကို ဦးနှောက်ကင်ဆာဆိုပြီး မှားယွင်းကုသမှုကြောင့် လူနာသေဆုံး
ကပ္ပတိန်အမေရိကမင်းသားနဲ့ တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ (or) သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိုဒယ်မင်းသမီး ၁၃ ယောက်
ချိုင်းဖြူချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း
ဝိတ်ကျသွားပြီးနောက် အရင်ထက် ပိုလန်းလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်အလင်းရောင်